सभामुखमा महरा निर्विरोध – Makalukhabar.com
काठमाडौं, फागुन २५ । प्रतिनिधि सभाको सभामुखमा माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । सभामुखमा महराको मात्रै उम्मेदवारी परेपछि उनी निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन् ।
नेपाली काँग्रेसले प्रतिनिधिसभाको सभामुख पदमा उम्मेदवारी दिएन । सभामुखको सालिन व्यक्तित्व र सन्तुलित व्यवहारले संसद् र संसदीय पद्दतिको गरिमा अभिवृद्धि हुने विश्वाससहित आफ्नो पार्टीले उम्मेदवारी नदिएको पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताए ।
शर्माले सिंगो संसद्को नायक निर्विवाद ढंगले चयन गर्न प्रतिपक्षी दलको समेत फरक नरहोस् भन्ने मनसायमा साथ उम्मेदवारी नदिएको स्पष्ट पारे ।
सभामुखमा महरा निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा भने भोलि बस्ने संसद बैठकबाट मात्रै गरिने बताइएको छ । संसद सचिवालयका प्रवक्ता डा. भरत गौतमका अनुसार शनिबार बस्ने संसद बैठकमा प्रस्तावकले प्रस्ताव र समर्थकले समर्थन गरेपछि संघीय संसदले सभामुख पदमा एक जनाको मात्रै उम्मेदवारी परेको जानकारी गराउने र बैठकको अध्यक्षता गरेका व्यक्तिले निर्विरोध भएको घोषणा गर्नेछन् ।
वाम गठबन्धनबीचको सहमति अनुसार महरा माओवादीका तर्फबाट सभामुखको उम्मेदवार बनेका हुन् । सभामुखका लागि शनिबार संसदमा मतदानको कार्यतालिका भएपनि एक जनाको मात्रै उम्मेदवारी दर्ता भएपछि उक्त नाम निर्वाचित भएको घोषणा गरिने छ ।
संविधान जारी भएपछिको पहिलो जननिर्वाचित संसदको पहिलो सभामुखमा बन्न लागेका महरा वाम गठबन्धनको तर्फबाट दाङ– २ बाट उम्मेदवार बनेर ४० हजार ४२ मतका साथ १४ हजार १ सय ४५ को अग्रतामा विजयी भएका हुन् ।
तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चा नेपालको तर्फबाट २०४८ सालमा रोल्पा क्षेत्र नं. २ बाट निर्वाचित भएका महराले उनले २०६४ मा भएको संविधानसभा निर्वाचनमा दाङ– ३ बाट अत्यधिक मतले जीत हात परेका थिए भने दोस्रोपटक भएको संविधानसभा निर्वाचनमा रोल्पा– २ बाट फेरि विजयी भए । प्रतिनिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा पुनः दाङ २ बाट उम्मेदवारी दिएका महरा भारी मतान्तरले विजयी भए । २०४८ सालमा उनीसँगै प्रतिनिधिसभामा विजयी हुने ९ जना सांसदमध्ये अहिलेसम्म निरन्तर जीत हात पार्ने नेता हुन् महरा ।
उनी यसअघि पटक पटक मन्त्री र उपप्रधानमन्त्री भइसकेका छन् ।